Avy any Thailand ka hatrany Laos ~ Journey-Assist - Avy any Laos ka hatrany Thailandy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Avy any Thailand ka hatrany Laos
Avy any Thailand ka hatrany Laos. Avy any Laos ka hatrany Thailandy
Ahoana ny fomba hionona any Thailandy mankany Laos
Matetika ny ririnina dia aleony mangataka visa amin'ny Laos, satria eto no masoivoho mahatoky indrindra izay mangataka antontan-taratasy kely indrindra. Voalohany, eritrereto ny safidy ho tonga avy any Thailandy ao renivohitra Laos - Vientiane, mampiasa fitaterana an-tanety. Betsaka ny lalana azo atao eto.
Ao amin'ny Chiang Mai Bus Station Arcade Bus Terminal, afaka mividy tapakila mankany Udontani, izay 50 km miala ny sisintany Thai-Lao. Ny tapakila toy izany dia mitentina 640 baht. Mandeha amin'ny alina ny fiara fitaterana ary miala amin'ny 19.30 ary tonga amin'ny 05.30. Avy eo azo atao ny safidy 2.
Misy fiara fitateram-bahoaka 2 any Udontani - antitra sy vaovao. Ny fiara fitaterana mankany Vientiane avy amin'ny gara vaovao dia mitentina 80 baht. Talohan'izay dia ho tonga amin'ny tuk-tuk ny fiara fitateram-bahoaka avy any amin'ny toerana misy any Udontani, 60-80 baht ny saran-dàlana.
Ny minibus misy fiaramanidina mihazakazaka miainga avy any amin'ny tsenam-barotra ao Udontani mankany amin'ny sisintany dia 50 baht ny vidiny. Tokony hitafy akanjo mafana na mafana sweater ianao, satria ny kabinetra no mitsoka mafy be.
Avy eo dia afaka miampita ny sisintany mandeha ianao, miampita ny renirano Mekong manaraka ny tetezana Friendship (20 baht) ary miafara ao Laos. Miampita ny sisin-tany ianao dia hahita mpamaky taxi sy tuk-tukers avy hatrany, izay hanolo-tena hanolotra anao hitondra any Vientiane (30 km miala eto) raha mandoa sarany tsy mendrika (amin'ny 200 ka hatramin'ny 600 baht, na mihoatra aza). Tokony hodian'izy ireo tsotra izao ary handeha am-pahatoniana 100 metatra mankany amin'ny fijanonan'ny bus. Amin'ny fiara fitaterana, afaka tonga any Vientiane 6es Lao bales ianao (izay mitovy amin'ny Baht Thai 000 ihany).
Misy safidy 3 tokony hiainga avy any Bangkok ho any Vientiane - 2 amin'ny fiara fitaterana ary 1 amin'ny lamasinina:
Fiara bus avy any Bangkok mankany Vientiane dia miala amin'ny 20.00 miala avy amin'ny Mo Chit Bus Station, ary tonga any Vientiane amin'ny 07.00. Ny tapakila iray dia mitentina 900 baht.
Raha tsy nahazo tapakila mivantana ianao, dia afaka mankany Udontani na mankany amin'ny tanàna Thai hafa - Nong Khai, izay tena akaikin'ny sisin-tany. Avy amin'ireto toeran-kafa ireto ny fiara fitaterana mankany renivohitra Lao dia miverina matetika kokoa, afaka mankany amin'ny sisin-tany ihany ianao, ary mandeha an-tongotra.
Ny lamasinina manomboka any Bangkok ka hatrany Nong Khai dia miala amin'ny hariva, tonga maraina. Ny tapakila mora indrindra dia lafo 213 baht (isaky ny mpandray anjara amin'ny kilasy fahatelo), ny lafo indrindra - 1 baht (fiara an-kilasy voalohany). Ho an'izay mikatsaka ny andro hahatongavan'ny fahazoan-dàlana any Vientiane, ny fiaran-dalamby faha-317, izay tonga ao Nong Khai amin'ny 77, dia mety. Avy eo dia tokony haka tuk-tuk ianao haka ny toeran'ny gara mankany amin'ny sisin-tany. Fa raha tsy maika, dia afaka mandeha amin'ny sisintany mandeha an-tongotra - 05.05 km miala eo amin'i Nong Khai ihany.
Tsy misy fiaramanidina mivantana avy any Pattaya mankany Laos. Na izany aza, mandao azy ireo ireo bus ka tonga any Udontani sy Nong Khai. Ny vidin'ny tapakila mankany Nong Khai dia 550 ka hatramin'ny 680 baht. Avy any amin'ny gara any Nong Khai dia afaka mankany Vientiane ianao na afaka manao tuk-tuk izay mankany amin'ny sisin-tany, avy eo hiampita ny tetezana Mekong Friendship amin'ny fiara fitateram-bahoaka mandritra ny 20 baht, ary avy eo dia mitaingina bus mankany Vientiane.
Fiaramanidina avy any Bangkok mankany Vientiane
Fiaramanidina mivantana iray avy any Bangkok mankany Vientiane dia manidina ao anatin'ny 1 ora sy 10 minitra monja. Ny tapakila iray izao dia lafo eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 500 2 baht ho an'ny fiaramanidina Air Asia. Miala ao amin'ny seranam-piaramanidina Don Muang sy Suvarnabhumi. Amin'ny sidina dia afaka mandefa sakafo atoandro ianao, izay mitentina 000 baht isaky ny olona. Mipetraka amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Vientiane Wattay International. Ny sisiny ankavanan'ny fivoahana dia misy tombam-bola amin'ny vola, hafahafa tsara. Avy amin'ity seranam-piaramanidina ity mankany amin'ny hotely ao afovoan-tanànan'i Laos, afaka mandeha amin'ny fiara fitaterana ianao, ho 200 bales ny vidiny (izany dia 15 baht na 000 dolara amerikana) na amin'ny fiarakaretsaka - dia ny vidiny dia eo amin'ny bales 60 2 eo ho eo (60 baht na $ 000).
Vientiane. Renivohitr'i Laos.